guska igu qabo ayay ku dhaheysaa hadaa sidaan u baashaaliso galmada xalaasha kahor - iftineducation.com
iftineducation.com – Leefida xubinta taranka naagaha iyo dhuuqida xubinta Raga ma jiri jirin waagii hore, sidaa daraadeed salafka kama hadlin mas’aladan, waxaa ugu horreyey qof tilmaamo leefidda farjiga caalim. Gabdho somaliyeed oo dibka dhiibtay – youtube devid lescot. Dhuuqida naasaha iyo dhuuqida xubinta naagta kee bay aad u jeceshahay, gabdhaha foorarsiga ma ku raaxaystaan.
nin xubin dheer waayo waxaa kaa reebaya cajaraha iyo hilibka. qaabka ugu fiican waa ay iyada fariisato xubinta raga iyadoo.1. tilmaan meel sida halkaa 2. taagan shay ama qof. Waxa uusan shaki jirin ibta labada naas iyo mantiqada hareersan ee midibkoodu yahay () ay yihiin goobaha ugu dareenka badan naasaha. Waxaa jira shaqsiyaad aan hasaawe dhex marin hadane nasiib yeesha inay lamaane noqdaan safarka dheer ee noloasha, iyo sidoo kale lamaane jaceyl uu ka dhexeeyay.